Oké mmiri ozuzo ahụ hapụrụ ọtụtụ nbibi na ọnwụ abụọ na Murcia na Alicante | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Orihuela. Foto: Manuel Lorenzo (EFE)
Mmiri mmiri ozuzo na ifufe na-emetụta mpaghara ndịda ọwụwa anyanwụ dum nke Iberian Peninsula na Balearic Islands na-akpata ọtụtụ mbibi. N'ime mmebi ndị ahụ anyị hụrụ osimiri tojubigara, mbibi nke ihe na idei mmiri n'ụlọ, imechi ụlọ akwụkwọ na okporo ụzọ yana nke kacha njọ, ọnwụ abụọ.
Oké ifufe a ga-amalite ịgbada ma wepụ echi na peninshula kama ọ na-adịgide na Balearic Islands na ụfọdụ akụkụ nke Catalonia.
Houseslọ ndị idei mmiri mere. Foto: Monica Torres
Ọnwụ ndị ahụ emewo n’ime Murcia na Alicante. N'ihe banyere Muria, ihe dị ugbu a bu ozu nwoke 40 dị afọ buru ibu gaa n'ụlọ na Los Alcázares. O mere na Satọdee gara aga mgbe mmiri kpaliri otu agadi nwoke na Finestrat cove.
Banyere ide mmiri a, anyị na-achọta nke osimiri Segura ka ọ na-agabiga Orihuela na Alicante na Júcar Hydrographic Confederation kpebiri ibupute mmiri na ọdọ mmiri Bellús na Beniarrés iji belata mmụba ahụ.
1 Mmebi mebiri na Murcia
2 Mmebi mebiri na Valencia na Balearic Islands
3 Ihe ize ndụ ahụ adịbeghị
Mmebi mebiri na Murcia
Iji chọpụta etu ajọ ifufe ahụ mebiri, onye isi ala Murcia, Pedro Antonio Sánchez, nyere ntụzịaka nzukọ nzukọ nke ndị ọrụ mberede niile inwe ike ịkọwa ha. Nzukọ ahụ nwekwara ndị nnọchi anya Gọọmenti, Antonio Sánchez-Solís.
Na mgbakwunye na nzukọ ahụ, onye nlekọta ime ụlọ, Juan Ignacio Zoido, agaala Murcia ịga leta mpaghara niile kachasị emetụta ma chịkọta ndị agha na-ahụ maka ọnọdụ mberede, nchekwa na enyemaka.
Mịnịstrị na-ahụ maka nchekwa ebunyela ndị agha ọhụrụ nke Emergencylọ Ọrụ Mberede Ndị Agha (UME) nke ahụ ga - enyere ndị agha 160 aka itinye na chi ọbụbọ na Los Alcázares. Ndị agha ọhụrụ a nwere ihe dị ka ndị agha iri ise.
Njupụta nke Rio Clariano. Foto: Juan Carlos Cárdenas (EFE)
Mmiri zooro ike na otu ubochi agbaala 57% nke ihe niile zoro n'otu afọ. Nke a emeela ka idei mmiri bute ụzọ 19 na mpaghara Murcia nke Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas na Mazarrón. O mekwara ka emechi ụlọ ọgwụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara ahụ dum, yana kọleji na ụlọ akwụkwọ dị na mpaghara 28 na mahadum atọ ahụ. Iji na-emeso ndị idei mmiri metụtara, Infanta Elena High Performance Center, Red Cross arụnyewo ebe obibi maka ihe dị ka mmadụ 200 kpọpụrụ n'ụlọ ha na Los Alcázares.
Ndị ọrụ afọ ofufo Red Cross. Foto: Manuel Lorenzo (EFE)
Mmebi mebiri na Valencia na Balearic Islands
Mpaghara Alicante na Valencia ka nọ n'ihe egwu ma ọ bụ ya mere ide mmiri ahụ ji kwụsị okporo ụzọ 14. Ọzọkwa ụfọdụ ọchịchị nke 129 akwụsịla klaasị yana ụlọ akwụkwọ anọ nke Mahadum Miguel Hernández nke Elche.
Na Valencia osimiri Clariano ejupụtala ma mee ka idei mmiri nke ọtụtụ ụlọ dị n'obodo Ontinyent wee chụpụ ha. Osimiri Magro, bụ ụtụ nke Júcar, edebanyela ide mmiri dị oke mkpa ka ọ na-agafe Real, Montroy na Alcudia.
Idei mmiri na-adọba ụgbọala. Foto: Morell (EFE)
N'aka nke ọzọ, na Balearic Islands, Ọrụ Mberede ọ gara ihe 148 mere na naanị 12 awa. Onweghị otu n'ime nsogbu ahụ dị oke njọ, mana ọ ga-ezu ịbepụ klasị taa na echi na obodo iri na asaa n'ihi ihe isi ike ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ.
Ihe ize ndụ ahụ adịbeghị
Ihe egwu idei mmiri na oke mmiri ozuzo ka dị na Alicante na Valencia. Dabere na Mlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ihu Igwe nke State, a na-echekwa nchedo uhie maka mmiri ozuzo na oroma na ụsọ oké osimiri n'ihi oké ifufe na ebili mmiri nke ihe karịrị mita anọ.
Onye isi oche nke Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ekwuputala na Gọọmentị ya ga-akwado usoro a na Fraịde iji belata mbibi nke oké ifufe a na nke 27 gara aga na 28 Nọvemba.
Na ihu ọma, dịka echi, oké ifufe a ga-agbada na ndịda ọwụwa anyanwụ nke peninshula, n'agbanyeghị na oke mmiri ozuzo na-aga n'ihu na Balearics (ọkachasị na Mallorca na Menorca) yana northeast nke Catalonia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Idei mmiri » Oké ifufe ahụ na-ahapụ ọtụtụ mbibi na ọnwụ abụọ na Murcia na Alicante
Kedu ihe dị iche na ihu igwe na ihu igwe?